Chii chitsva kubva kuna Jo Nesbø. Mumatsutso Mugari wenhaka uye ... achadzoka Harry Hole | Zvazvino Zvinyorwa
Chii chitsva kubva kuna Jo Nesbø. Mumatsutso Mugari wenhaka uye… achadzoka Harry Hole
Mufananidzo waJo Nesbø: (c) Debra Hurford Brown.
Iyo yakazara parishi yevakatendeka ve Jo Nesbø ndichiri mune rombo rakanaka gore rino. Muna Kubvumbi tanga tave Macbeth and in octubre inoenderera ichitengeswa Mugari wenhaka (dudziro-kana danho remupepeti- yemahara zvechokwadi eiyo yekutanga zita Sonnen, zviri nyore seMwanakomana). Ndakazviverengera ndega muzuva rake uye Ndinoikurudzira kubva ikozvino.
Uye gore rinotevera, mu julio, iyo isina moto inodzoka (nekuti inongofanirwa kupisa) commissioner Harry hole murungano rwegumi nembiri, banga (Ini handishinga kududzira, zvino zvinoitika zvinoitika, asi ikozvino uye chaizvo zvazviri Banga). Ngatione ndezvei idzi mbiri nhau uye netariro ivo vachakurumidza kuburitsa mamwe manyowani maviri ayo achiri kuuya kubva kuNesbø: Ropa pachando y Pakati pehusiku zuva.
Vanowanzoverenga vaActualidad Literatura vanofanira kunge vatoziva nezvangu ngano uye yakasimba nyaya yerudo neiyi viking strip, Akanga ari shark wezvemari, dombo rakabudirira (anga ari bowling zhizha rose mune iwo mafjords epasi rake) uye tenzi wenyaya yematsotsi. Saka zvirokwazvo hazvishamise kuti ini ndinorasikirwa neonline yangu pandinotaura nezvake. Ikoko vanoenda zvandinoona nezve zviri kuuya uye zvisipo.
3 Saka zvino…
El mugari wenhaka
Inotevera inotengeswa 11 yeOctober uye ndiyo yechipiri yakazvimirira inova mushure Vanotsvaga. Yakabudiswa mu 2014, saka yaive nguva yandasvika nenzira iyi. Ko chii nezve dudziro yemusoro Ndatotaura nezvazvo. Dzimwe nguva sarudzo dzevagadziri dzekuchinja iyo yekutanga zvinosekesa, zviri kumunyori, nekuti ndiani anoziva nzira. Pamusoro pezvo, naNesbø kusvika zvino vanga varemekedza mazita avo ekutanga. Zvisinei…
Iye protagonist ndiye Sonny lofthus. Ane makore makumi matatu uye akashandisa makore gumi nemaviri apfuura ehupenyu hwake mujeri nekuda kwemhosva dzaasina kupara. Akapindwa muropa neheroin kubva ipapo baba vake vakasarudza kuzviuraya asati asarudzwa semupurisa ane huwori. Sonny akapinda mumatambudziko uye anopedzisira ave mujeri.
Ipapo inova mhando yeguru kana kureurura kwevamwe vasungwa, asi ariwo muzinda wevazhinji: vakuru nevatariri, mapurisa, magweta… Uye vese vanoda kuti agare mutirongo. Uye pamusoro pezvose, mhosva yakanyanya kukosha ishe muOslo.
Asi rimwe zuva mumwe wevasungwa anoudza Sonny Chinhu chakakosha kwazvo nezvekufa kwababa vake. Saka Sonny anosarudza izvozvo inofanirwa kusununguka chero. Uye achazviita mune imwe yezvikamu izvo zvinoita sezvisingabviri uye mucherechedzo weimba yeNesbø. Wobva wangofunga nezvekutsvaga kutsiva chero zvodii, kubva pasi pevhu kusvika kune vepamusoro vanoita zvemitemo, pamwe nekuenderera mberi nekuongorora zvakanyatsoitika. Asi ivo vanomutambudzawo. Vari munzira vanoyambuka Simon Kefas, murwi wekare anozivawo zvimwe chokwadi pamusoro paSonny, uye iyo rudo rwemusikana izvozvo zvinokubatsira.
Kune nguva dzose kusava nechokwadi yevaverengi vakazvipira zvakanyanya uye vakazvipira kana iye munyori akabudirira kwazvo aine hunhu akateedzera chinja chechitatu nemhepo nedzimwe nyaya. Ndozvinoitika neNesbø. Wake Harry Hole chisikwa yakakura uye yakatenderera kuti yakatopfuura uye iyo inodzikatidza (uye pamwe ichafukidza kare, kunyangwe Nesbø achichida kana kwete) chero chimwe chinhu chandinonyora.
Zvakaitika na Vanotsvaga (Shanduko yezwi rerondedzero kumunhu wekutanga, nyaya sepakutanga senge, protagonist yakasiyana kwazvo ...). Uye zvakaitika zvakare ne Macbethque akaparadzanisa vakatendeka vake mune zvinopesana maonero. Zvinonzwisisika. Asi zvirokwazvo, Macbeth ndiMacbeth uye Nesbø haana chaakagadzira chero chinhu, iye akazviudza chete nenzira yake. Izvi zvinogona kuitika zvakare ne Mugari wenhaka uye izvo zvisati zvatsikiswa, nyaya zvipfupi zvakanyanya uye zvakasiyana zvakanyanya neizvo zvinotarisa mupurisa ane bongozozo weNorway.
Ini ndinogona chete kutaura izvozvo Mugari wenhaka Ndakaifarirakuvada kwandakaita Vanotsvaga, Ropa pachando y Pakati pehusiku zuva. Kuti ndakawana imwe nyaya huru mumanyorero eimba yeNesbø. Nekukanganisa kwayo, iyo vanhu yehunhu hwake, akaunganidzwa nezvehurongwa hwayo and the kudanana kwakadzama izvo zvinotsigira zvese. Ehe, Harry haapo, asi hazvidiwe. Kune hupenyu hunopfuura iye, kune dzimwe nyaya. Uye ivo vanokosha nekuti vanobva kuNesbø.
Zvakare, uye semwero Ini ndinogona kutaura kubva pamaonero emunyori, nguva nenguva tinoda kushandura chip, fungidzira zvisikwa zvitsva uye gadzira nyika nyowani. Asi ichokwadiwo kuti hatigoni kugara tichida uye tinogonawo kuodza moyo. Mubvunzo ndewekuti isu tinozvifunga. Uye vanyori vakasimbiswa vanazvo kupfuura zvinofungidzirwa. Ehe, nemurume uyu ndinazvo zvakajeka.
Asi zvakanaka, hapana munhu anonetseka. Ehe, anodzoka, yedu inodakadza kupindwa muropa, yedu pachedu Jim Beam: Harry. Uye zvichave neizvi Banga. Kunyangwe, kana ivo vachiita zvakafanana neyakare yapfuura, zvakafanana ipapo zita racho richava Kumucheto, Iyo yakatemwa o Banga.
Ndizvozvo. Pakupedzisira Chikunguru Nesbø akazivisa kuti iyo chegumi nembiri Harry Hole inoverengeka ichave iri panze 11 de julio de 2019. Sezvineiwo, pakutanga tinowana Harry achimuka ne hangover inotyisa uye ropa rakavhara maoko uye zvipfeko. Dambudziko rinoshumirwa, kunyangwe tichiziva Hole, hatichashamise kuti anopinda mune yakaipa. Iyo nyaya, panguva ino, ndeyekuona kuti Nesbø achaenda (zvakare) sei mushure mekuita kuti chisikwa ichi chipfuure nehutsinye hwakawanda.
Icho chokwadi ndechekuti iyo novel ichaunza zvakare muvengi wekare uye anouraya waHarry. Zvinotaridzika kunge zvisingaite kuti asara nechero izvo zvatova nazvo. Asi iye mweya wadhiyabhorosi uye wakapenga uyo unosiyanisa Nesbø ucharamba uchimugadzirira zvakaipisisa. Kunyangwe, sevaya vedu vanonamata uyu mupurisa asina tariro asina kukwana achiziva kwazvo, murwi wake akasviba kwazvo acharamba ari iye.
Hapana, kumirira uye kuramba uchiverenga Nesbø. Pasina kufungirana, pasina kutya kwekuodzwa mwoyo, pasina rusaruro. Uye zvakare, ndiyo yakanakisa kuumba yakanyanya kukodzera maonero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Chii chitsva kubva kuna Jo Nesbø. Mumatsutso Mugari wenhaka uye… achadzoka Harry Hole
Mabhuku akanakisa ezana ramakumi maviri nemasere